China CNC Pipe Laser Cutting Machine na Fiber Laser source emepụta na soplaya |UNIONLASER
Ụdị: Tube eriri laser ọnwụ igwe
Ọnụ ahịa: $18999-$35999
1. Max ọnwụ ogologo nke 6m na dayameta nke 220mm.
2. Usoro na-arụ ọrụ: Fiber Laser ọnwụ.
3. Ịcha akụkụ oblique na njedebe nke ọkpọkọ.
4. Ịcha maka iche iche-akuku uzo ihu.
5. Ịcha na oghere oval square na ọkpọkọ square.
6. Ebipụ ígwè cylinder ọkpọkọ.
7. Ịcha ọtụtụ eserese pụrụ iche na ọkpọkọ ma bepụ ọkpọkọ.
Ogologo ịkpụ 6000*mm
Usoro njikwa Sistemụ ịkpụ cyptube
Akụkụ nhọrọ Sistemụ nbudata na nbudata akpaaka maka ọkpọkọ
N'ihi na elu na-agba na mgbanwe ọnwụ nke eriri laser ọnwụ igwe, ọtụtụ mgbagwoju ndịna-emeputa nwere ike ngwa ngwa hazie site oru oma fiber laser ọnwụ usoro na ọnwụ pụta enwetawo ihu ọma nke ịchọ mma ụlọ ọrụ.Mgbe ndị ahịa nyere iwu nhazi pụrụ iche, enwere ike bepụ ihe ndị dị mkpa ozugbo mgbe emechara ihe osise CAD, ya mere ọ dịghị nsogbu na nhazi.
Ọtụtụ akụkụ metal nke ụgbọ ala, dị ka ọnụ ụzọ ụgbọ ala, ọkpọkọ iyuzucha ụgbọ ala, breeki, wdg nwere ike ịhazi ya nke ọma site na igwe eji egbutu eriri laser.Tụnyere omenala metal ọnwụ ụzọ dị ka plasma ọnwụ, eriri laser ọnwụ ana achi achi magburu onwe nkenke na-arụ ọrụ arụmọrụ, nke ukwuu mma na arụpụtaghị na nchekwa nke ụgbọala akụkụ.
3 Ụlọ ọrụ mgbasa ozi
N'ihi na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke customization ngwaahịa na mgbasa ozi ụlọ ọrụ, omenala nhazi usoro bụ doro anya na-adịghị arụ ọrụ, na eriri laser metal cutter bụ nnọọ adabara maka ụlọ ọrụ.N'agbanyeghị ụdị aghụghọ ọ bụla, igwe nwere ike ịmepụta ngwaahịa ọla laser dị elu maka iji mgbasa ozi.
4 Ụlọ ọrụ kichin
N'oge a ndị mmadụ nwere ọchịchọ dị elu na nhazi na ngwa nke kichin, ya mere ngwaahịa ndị metụtara kichin nwere ahịa na-ekwe nkwa gburugburu ụwa.Fiber laser ọnwụ igwe bụ nnọọ adabara ịcha mkpa igwe anaghị agba nchara na ngwa ngwa ọsọ, elu nkenke, ezi mmetụta, na-eji ire ụtọ ọnwụ elu, na ike na-aghọta ahaziri na ahaziri ngwaahịa mmepe.
5 ụlọ ọrụ ọkụ
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji nnukwu ọkpọkọ ígwè eme oriọna ndị dị n'èzí nke a na-eji ụdị ịkpụ dị iche iche eme.Usoro igbucha omenala ọ bụghị naanị na ọ nwere arụmọrụ dị ala, mana enweghịkwa ike nweta ọrụ nhazi ahaziri onwe ya.Fiber laser metal plates na ọkpọkọ ọkpọkọ na-eje ozi n'ụzọ ziri ezi dị ka ngwọta laser zuru oke nke na-edozi nsogbu a.
6 Nhazi ígwè mpempe akwụkwọ
Fiber laser ọnwụ igwe a mụrụ hazie metal Ibé akwụkwọ na ọkpọkọ na ọgbara ọhụrụ metal nhazi ụlọ ọrụ ebe nkenke na arụpụtaghị ihe na-esiwanye chọrọ.UnionLaser fiber laser cutters egosila ntụkwasị obi na ịrụ ọrụ nke ọma dị ka ndị ahịa anyị si kwuo'nzaghachi, ị nwekwara ike ịlele ọkwa a ka ịmatakwu gbasara njirimara na uru nke laser fiber anyị.
7 Akụrụngwa mgbatị ahụ
Ngwá ọrụ ahụike ọha na eze na akụrụngwa ụlọ emebela ngwa ngwa n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na ihe ga-eme n'ọdịnihu dị ukwuu.Fitness akụrụngwa n'ichepụta ọrụ e booming na eriri laser metal ọnwụ technology na-ẹkenam.Ozi ndị ọzọ banyere mma akụrụngwa laser ọnwụ, biko gụọ a njikọ njikọ ka ị nweta ihe nghọta.
8 Ụlọ ọrụ ngwa ngwa
Site na mmepe nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ, teknụzụ nhazi ọdịnala nke ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ụlọ na-aga n'ihu na-agbanwe ma kwalite.Igwe ọkụ laser metal bụ otu n'ime usoro nhazi kachasị ike na ụlọ ọrụ nhazi igwe ugbu a.N'ime usoro nrụpụta ngwa ụlọ, ma ọ bụ iji melite ogo nhazi ma ọ bụ kwalite ọdịdị nke ngwaahịa ahụ, enwere ọtụtụ ihe a ga-eme maka ndị na-egbutu laser fiber.
Nke gara aga: ígwè mpempe akwụkwọ Fiber laser ọnwụ igwe
Osote: CNC Pipe na efere Laser Cutting Machine